Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Dejan Kulusevski Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ihe omuma
Ihe omuma anyi nke Dejan Kulusevski na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Mbido ya, Ndị nne na nna, Ezinaụlọ, Enyi nwanyị / Nwunye ka ọ bụrụ, Ndụ, Net Worth na Ndụ Nke Onwe.
Na nkenke, anyị na-ewetara gị akụkọ ndụ zuru oke nke Swedish Footballer - site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Iji mee ka agụụ na-agụ gị, lelee mmalite ya ka ọ bụrụ onye ama ama - nchịkọta doro anya nke Dejan Kulusevski's Bio.
N'ihi ikike ya nwere ọtụtụ akụkụ, ọtụtụ ndị na-akwado ya atụnyere ya na akara ngosi kachasị asọpụrụ nke Sweden, Zlatan Ibrahimovic. Ọbụna ndị mgbasa ozi na-akpọ Dejan Kulusevski dị ka onye isi ọhụụ nke Blågult.
Ka ịrị elu ya na-aga n'ihu na-agbanye ụwa bọọlụ, anyị ghọtara na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole maara akụkọ n'azụ aha ya. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido.
Dejan Kulusevski Nwatakiri Akụkọ:
Maka Biography Starters, ọ na-eburu aha “Shady”. Dejan Kulusevski a mụrụ na 25th ụbọchị Eprel 2000 na nne na nna Macedonian na Vallingby, Sweden.
Onye ọkpụkpọ kachasị nke abụọ bụ nke ọdụdụ n'ime ụmụaka abụọ n'ezinụlọ ya. Lelee nne ya mara mma (na 40s) na nna mara mma (na 50s).
N'agbanyeghị na a mụrụ ya na Sweden, o tolitere ịmara asụsụ dị iche iche, gụnyere nke ala nna ya.
Dika nwatakiri ikpe azu (nwa ulo), nne na nna Dejan Kulusevski na nwanne ya nwanyị (Sandra) mere ya ka o nwe uzo ya dika ihe nke onwe ya biara ya.
Dejan Kulusevski Ezigbo Ezinụlọ:
Speed ​​dribbler sitere na Stockholm bara ọgaranya - isi obodo Sweden dị na agwaetiti 14 ma jikọta ya na 57 akwa.
Ndị nne na nna Dejan Kulusevski bụ ndị ọgaranya nwere ike inye ya mkpokọta kachasị egwu nke egwuregwu ụmụaka gụnyere bọọlụ. Nwa nwoke a nwere obi uto adighi n'etiti ndi nwere nkenke akuko.
Dejan Kulusevski Ezinaụlọ:
Ka anyị nweta ihe ziri ezi; o nwere mgbọrọgwụ Macedonian n'agbanyeghị Sweden bụ ebe amụrụ ya. Ma nne na nna Dejan Kulusevski bụ ndị Masedonia kpebiri na ha ga-amụ nwa nwoke na Sweden. Onye na - agba bọọlụ tolitere wee ghọọ Polyglot maka agbụrụ dị iche iche.
Nnyocha na-egosi na ọ maara nke ọma n'asụsụ ise - na maka obodo amụrụ ya, Slavic, Italian, English na German.
Wearing na-eyiri agba ojii na agba odo, ọ na-ejide obodo Balkan (Macedonia) n'ime obi ya.
Dejan Kulusevski Biography - Akụkọ nke football:
Onye na-eto eto malitere inwe mkpali nke football na-ahụ n'anya site n'aka nwanne ya nwanyị, Sandra. N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ bụ onye ofufe nke Ronaldinho ọbụnadị nwere akwụkwọ ahụaja nke ndị Brazil na mgbidi nke ime ụlọ ya.
N'oge ahụ, Sandra na nwanne ya nwoke ga-aga n'ubi, na-ele ya ka ọ na-agba bọl n'okporo ámá ka ọ na-enwe obi ụtọ.
Nkwado Sandra site na mpaghara ndị nyere afọ isii ihe mere ọ ga-eji lekwasị anya karịa ụmụaka ndị ọzọ.
Iji mezuo iwu, ndị nne na nna Dejan Kulusevski kwadoro nwa ha nwoke ka ha debanye aha na Masedonia IF Brommapojkarna agụmakwụkwọ ntorobịa na 2006.
Ndụ mbu na football:
N'ụzọ dị mwute, mmalite nke ya na agụmakwụkwọ gụrụ ya na ịgbachi nkịtị. Pụtara, ọ dịghị onye nwere ekele maka ikike okike ya belụsọ mmadụ ole na ole na ndị ezinụlọ.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ nọgidere na-eme nke ọma ma nwee ọmarịcha ebumnuche ọfụma ruo n'ọkwa ebe nka ya na-ekwu okwu. O kwuru otu mgbe ọ na-etolite;
"Ọnweghị ihe agaghị ekwe omume. Ihe agaghị ekwe omume na-ewe ogologo oge. Ihe niile ịchọrọ, ịnwere ike ịnwe. Ihe ị ga-eme bụ ikwere na onwe gị. ”
Site na nkwado nke nne na nna ya na nwanne ya nwanyị, ọ gafere afọ iri nke ọzụzụ ntorobịa na Masedonia.
Obi dị m ụtọ, ọnụ ụzọ maka ihe ịga nke ọma meghere dị ka Kulusevski dị afọ 15 na 2015 natara oku isonyere ndị otu mba U-17 nke Macedonian.
Egwuregwu ise ya na Macedonia zuru iji mee ka Sweden kwenye na ọ bụ onye ha na-achọ.
N'ihi ya, ha nyere Dejan onyinye dị mma karị nke mere ka ọ hapụ mba a mụrụ ya gaa Sweden.
Dejan Kulusevski Biography - Roadzọ a ma ama Akụkọ:
Akụkọ banyere ọkpụkpọ oku ya na mba ụwa mere nna ya mpako na obi abụọ adịghị ya na nne ya nwere obi ụtọ. Site na klọb ahụ, ọ theụ nke ezinụlọ ya amaghi oke ka nwatakịrị ahụ na-eto eto site na ọnwụnwa sitere n'aka Atalanta.
N'oge na-adịghị anya, ọ malitere ịgbagha nnukwu nsogbu ndị a na-emegide ya. Dị ka akara aka ga-enweta ya, nnukwu-kpakpando na-esote nwere ngọzi na ọsọ, ọsọ, ume. Nke a mere ka mgbasa ozi kpọọ ya Ọhụrụ Zlatan.
Dejan Kulusevski Successga nke Ọma Akụkọ:
Dika o gara n’ihu n’iru oru ya, ya mere o dekọtakwara nnukwu mmeri maka mba amụrụ ya. Na 2019, Kulusevski sonyeere ndị otu mba Sweden.
Naanị ihu ole na ole, ọ kpatara onwe ya onyinye nke kacha mma.
Dị ka na November 2020, ọ nọ n'etiti ndị Mmadụ iri kachasị dị oke ọnụ amụrụ na 2000 ma ọ bụ tupu site uru ahịa. Ọ bụ naanị oge tupu ọ ghọọ aha ezinụlọ zuru ụwa ọnụ. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Ọnye na-bụ Dejan Kulusevski Girlfriend and Wife ga-abụ?
Speedster nwere uto dị iche na ndụ mmekọrịta ya ma e jiri ya tụnyere ya Freddie Ljungberg, onye dere oge di iche iche asatọ n’ime afọ asatọ. Ọ chọpụtala na ọ dabara adaba ịrapara na naanị otu enyi nwanyị ya hụrụ ebe a.
Obi abụọ adịghị ya, ụmụ nnụnnụ n'anya ga-ewere mmekọrịta ha na ọkwa ọzọ nke ịbụ di na nwunye. Anyị na-atụ anya na akụkọ ịhụnanya ha agaghị anwụ na ha ga-ejedebe eriri ha.
Kulusevski nwere àgwà pụrụ iche nke mere ka ọ were ịkwụwa aka ọtọ karịa ihe ọ bụla ọzọ. Ọ naghị ezere ịrụsi ọrụ ike ma ọ na-enweta nkasi obi n'ịnọgide na-eguzosi ike.
Onye na-egwu egwu nke Juventus nwere mmasị ịnọnyere ndị enyi ya n'oge ọdọ mmiri. Site na obodo nne na nna ya, enwere ọtụtụ ụmụaka ndị hụrụ ụdị ememe ya n'anya ma hụ Dejan dị ka nnukwu nwanne nke nzọụkwụ ya kwesịrị ịgbaso.
Dejan Kulusevski si ebi ndụ:
N'ezie, ọ bụghịzị akụkọ na ọ na-enweta nnukwu ego na Juventus. Anyị enyochala ụzọ o si emefu ego wee chọpụta na ọ na-ebi ndu ndụ na-adabara akụ na ụba ya.
Nwa agbọghọ ahụ nwere mmasị na-ahụbeghị mkpa ọ dị ịgọnahụ onwe ya ihe ụtọ ọ nwere ike imeli. Anyị ahụwo ya ka ọ na-etinye ụbọchị ezumike ya n'akụkụ oke osimiri na-agbagharị ụgbọ mmiri.
Eziokwu bụ, ọ na-ebi ndu nke dị na ọkwa dị iche na onye obodo ya - Alexander Isak.
Igwe kpakpando Juventus na-akwụ ụgwọ kwa afọ nke € 2,002,997 na Juventus ma nwee Nzuzo Net nke ihe ruru € 1.5 nde.
Dejan Kulusevski Ndụ Ezinụlọ:
Peoplefọdụ ndị anaghị akọwa naanị mmekọrịta ha na ya naanị site n'ihe ọ na-eme na pitch. Ndị a bụ nne ya, nwanne ya na papa ya.
N'akụkụ a, anyị na-ewetara gị akụkọ gbasara ezinụlọ Dejan Kulusevski, bido n'isi ụlọ ya.
Banyere Dejan Kulusevski Nna:
Okwu enweghi ike ikowa nwa nwoke nke di n'etiti ya na nna ya. Ewezuga ịrụ ọrụ nna ya, nna Kulusevski na-enyocha ya mgbe niile n'ogige ọzụzụ ya mgbe ọ sonyeere Juventus.
N'ụzọ dị mwute, mgbe ọ malitere n'otu n'ime nleta ya na Ọktoba 2020, nna Kulusevski dabara na mberede. Obi dị m ụtọ na o si na beepụ nke ya na-apụ na nsogbu ahụ.
Banyere Dejan Kulusevski mama:
Ndị na - agba ọsọ bọọlụ na - enwe mmasị ịnọnyere nne ya nke ukwuu na ị ga - ewere ya dịka nwa mama.
Dị ka onye ikpeazụ a mụrụ, ọ bụ ihe dị mma ịmara na ọ na-enweta nkasi obi site na nne ya mgbe ọ bụla nsogbu ya na-ebuwanye ibu.
Banyere ụmụnne Dejan Kulusevski:
Onye nwere aka nri enweghi nwanne nwoke ma obu nani otu nwanne nwanyi o huru n'anya. Dị ka nne okuko si echebe nwa ya, ya mere nwanne ya nwanyị nke okenye chebere ya.
Sandra mara mma ma bụrụ onye na-enweghị nchebe na nwanne ya nwoke site na nwata.
Banyere ndị Dejan Kulusevski:
Enweghi ozi banyere nne nne ya na nna nna ya. Ọzọkwa, ọ dị ka Kulusevski enweghị ụmụ nwanne ma ọ bụ nwanne nwanyị n'oge a na-ede Ndụ Ndụ a. N'agbanyeghị nke ahụ, anyị ji n'aka na ndị nne na nna ya na ndị nne na nna ya nwere obi ụtọ na ọ rụzuru.
Dejan Kulusevski Eziokwu:
Iji mechie Life Life of Winger, nke a bụ eziokwu ole na ole ga - enyere gị aka ịmata Bio ya.
Eziokwu nke 1: Nkwụ ụgwọ ụgwọ ụgwọ na ego kwa sekọnd:
The nkezi nwa amaala si Sweden na-akpata € 52,919 otu afọ ga-arụ ọrụ 37.8 afọ iji mee ka ụgwọ ọnwa ya kwa afọ. Nke a bụ mmebi nke ego ya.
Kwa Afọ € 2,002,997
kwa ọnwa € 166,916
Kwa Izu € 38,460
Kwa .bọchị € 5,494
Kwa nke abụọ € 0.06
Kemgbe ịmalitere ile Dejan Kulusevski'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Eziokwu nke 2: Forhụnanya maka Pet:
Dị ka ọtụtụ ndị ọrụ ibe ya na azụmahịa ya, Kulusevski nwere ezigbo mmasị na nkịta. Ka a sịkwa ihe mere obi na-atọ ya ụtọ na ya na nkịta ezinụlọ ya a na-akpọ Nala.
Obere nwa mara mma na-arapara gburugburu Kulusevski mgbe ọ bụla ọ gara ileta ezinụlọ ya.
Eziokwu nke 3: Dejan Kulusevski Okpukpe:
O nwere ike ọ gaghị ele ya anya, mana onye na-agba bọlbụ nwere ịhụnanya miri emi maka okwukwe Ndị Kraịst ya.
Know maara na ọ na-eyiri uwe ejiji Santa mgbe ya na ụfọdụ ụmụaka na-agba ekeresimesi?
Site na nke a, anyị nwere ike ikwubi na nne na nna Dejan Kulusevski zụlitere ya dịka okwukwe ndị Kraịst.
Eziokwu nke 4: Enyi na Amad Diallo:
Onye na-enwe obi uto na-eme ezigbo enyi Amara Diallo. N'ụzọ na-akpali mmasị, Kulusevski na Diallo ghọrọ ndị enyi n'oge ochie mgbe ha abụọ na Atalanta nwere nkwekọrịta.
Eziokwu nke 5: FIFA stats:
Enweghị obi abụọ, na ịrụsi ọrụ ike na nkwekọrịta, onye na-eme ihe ngosi nwere ike mezuo ikike ya (edepụtara 88).
Igwuri egwu n’akụkọ ifo C Ronaldo, midfielder / winger na-enwe obi ụtọ iso ndị kasị mma na ụlọ ọrụ na-akpakọrịta.
Biography nke Dejan Kulusevski na-enyere anyị aka ịghọta na omume nkwenye zuru oke na ihe ndị nwere ike ime bụ isi ihe ịga nke ọma. Ihe omume Juventus bu kwa echiche na enweghi ike nwe onwe ya na akwukwo nkowa nke ndi nzuzu.
Site na mmalite, nne na nna nke Dejan Kulusevski hụrụ na ọ naghị eleghara ọhụụ ya anya. Ọ bụ ezie na nna ya kwadoro ya nke ọma, nne ya rụrụ ọrụ nkasi obi.
Sandra, nwanne ya nwanyị, mere ka ọ daa n'ụzọ nke ihe ịga nke ọma na-eduga n'inwe mmekọrịta ndụ n'etiti ha abụọ.
Ndị otu anyị na-agba mbọ maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ mgbe ha na-ebute akụkọ Dejan Kulusevski's Bio. Jiri obiọma kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọta ihe ọ bụla nke na-adịghị ka ọ dị mma na ọdịnaya anyị.
Ma ọ bụghị ya, ka anyị mara na ngalaba nkọwa, ihe ị chere gbasara Kulusevski. Iji lee Memoir ya anya, jiri tebụl Wiki.
Aha n'uju: Dejan Kulusevski
Aha Nick: Come
Age: Afọ 21 na ọnwa 6
Ebe amụrụ onye: Vallingby, Sweden
Nwanna nwanyị: Sandra Kulusevska
Rygwọ ọnwa kwa afọ: € 2,002,997
Ọnọdụ: Aka nri na midfielder
Ezigbo Net: Million 1.5 million (odika)
elu: 1.86 m (6 ft 1 na)